Halyayga Reer Germany Ee Lothar Matthaus Oo Aaminsan In Xulka Qaranka Brazil Uu Sanadan Ku Guuleysan Doono Koobka Aduunka 2018. – GOOL24.NET
Halyayga Reer Germany Ee Lothar Matthaus Oo Aaminsan In Xulka Qaranka Brazil Uu Sanadan Ku Guuleysan Doono Koobka Aduunka 2018.
Xili uu maanta oo khamiis ah lagu daah furi doono koobka aduunka 2018 dalka Russia ayaa halyayga reer Germany ee Lothar Matthaus wuxuu ka sii hadlay aragtidiisa ku aadan ugu dambeyn xulka uu filayo in uu ku guuleysan doono koobka aduunka 2018.
Marka laga yimaado hadalka halyayga reer Germany xulka kubadda cagta waddanka Brazil ayaa wuxuu ka mid yahay xulalka ugu cad cad ee la saadaalinayo inay ka guuleysan karaan koobka aduunka 2018 wuxuuna kala siman yahay sida Spain, Germany, France iyo Argantina.
Xulka seleção ayaa safarkiisa Koobka Adduunka ee sanadkan ka bilaabi doona kulanka ay Axadda jilbaha isku wajihi doonaan wadanka Switzerland, taas oo ay u baahan yihiin inay guul weyn ka gaadhaan si ay usoo celiyaan kalsoonidii ka luntay tartankii hore. Kulanka xiga waxay iskaga hor iman doonaan Costa Rica oo ay ku wada ciyaari doonaan magaalada Saint Peretsburg.
Hadaba Lothar Matthaus ayaa wareysi uu siiyay wargeyska “Bild” ee ka mid ah kuwa ugu caansan ee dalka Germany ayaa wuxuu kaga hadlay: “Waxaan rajeenayaa in Germany ay gaari doonaan finalkii labaad ee xidhiidh ah, Brazil waxay noqotey koox bixisa heer wanaagsan oo horumar leh”.
“Waxaan rajeynayaa in xulalka Brazil iyo Germany ay isku arki doonaan kulanka finalka koobka aduunka 2018, waxaana rajeenayaa hadii ay dhacdo in xulka seleção uu 2-1 ku guuleysan doono, uma dhahayo kaliya inay bixinayaan qaab ciyaareed fiican, balse waxay noqdeen kuwa awoodooda ay sii korodhay”.
Lothar Matthaus ayaa wuxuu ka hadalkiisa arintan kusoo xiray: “Xulka Brazil wuxuu haatan u ciyaarayaan koox ahaan, waxayna wax ka barteen qaladaadkoodii koobkii aduunka ee 2014”.
Waxaa xusid mudan in xulka qaranka Germany uu guul weyn oo taariikhi ah kaga gaaray dhigiisa Brazil kulankii semi-finals-ka ee koobkii aduunka 2014 ay marti galiyeen Brazil, xulka Germany ayaana xiligaas ku awood sheegtay goolal gaarsiisan 7-1.
Xulka Germany ayaana kusoo guuleestay koobkii aduunka ugu dambeeyay ee sanadii 2014 lagu qabtay dalka Brazil, kadib markii ay kulankii finalka 1-0 ugu awood sheegteen dhigooda Argantina uu hogaaminayay Lionel Messi, goolka kaliya ee kulankaas ka dhashay waxaa dhaliyay xidiga kooxda Borussia Dortmun Mario Gotze.